चर्चित गायीका कमला घिमिरे दुर्घटनामा, यस्तो छ अवस्था – Dainik Sangalo
चर्चित गायीका कमला घिमिरे दुर्घटनामा, यस्तो छ अवस्था
August 16, 2020 652
काठमाडौं । चर्तित गायीका कमला घिमिरे दुर्घटनामा परेकी छन् । उनी पछिल्लो समय दोहोरीका लागि निकै चर्चित छन् । दोहोरीमा आफु भन्दा ठूला र चर्चितलाई पनि कडा जवाफ दिने कमला दुर्घटनामा परेको बारे सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ ।
उनको तस्बिर सहित कमलाको फ्यान क्लवले दुर्घटनाको खबर सार्वजनिक गरेको हो । तर उनको दुर्घटना कसरी भयो भन्ने खुलाईएको छैन । तर फ्यान क्लवले उनलाई धेरै चोट नलागेको र सामान्य घाइते भएको जनाएको छ । उनको चोट लागेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । मेडिकलमा उपचारार्थ कमलाको तस्बिर सार्वजनिक फेसवुकमा स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न भनिएको छ । उनको दुर्घटनाको कारण खुलाईएको छैन ।
नेपाली दोहोरी गीत संगीतको क्षेत्रमा अब्बल धादिङकी कमला घिमिरे यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल बनेकी छन् । सानै उमेरमा लाइभ दोहोरी गाएर सबैलाई चकित बनाएकी कमलाको चर्चा ह्वातै देश तथा विदेशमा बढेर गएको छ । छिनभरमै दोहोरीको टुक्का फुराउने कमलाको कला देखेर सबै चकित छन् ।
सानै उमेर भएपनी देश तथा विदेशमा नाम चलेका ख्याति प्राप्त गायक गायिकालाई समेत दोहोरीमा टक्कर दिने क्षमता देखेर सबै लोकपारखी दर्शक तथा स्रोता अचम्ममा परेका छन ।
बुबा कल्याण घिमिरे र आमा देवकी घिमिरेको कोखबाट जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १२ सांकोषमा करिव ११ बर्ष पहिले विपन्न परिवारमा भएको थियो । ९ वर्षको उमेरमै स्कुलका साथीभाई, घरछिमेकमा दोहोरी गाएर चकित पार्ने गर्थिन उनी । सानै उमेर भएपनी गहन शब्द लाई सरल भाषामा टुक्का जोडेर गाउन सक्ने क्षमताबाट त्यो बेला पनी गाउँमा सनसनी नै फैलिएको थियो ।
विद्यालयमा आयोजना गरिने अतिरिक्त प्रतियोगीतामा भाग लिई सबैको प्रशंसा हौसला र पोजिसन जित्ने उनको कला नै थियो । गाउँमा हुने चाडपर्व, विवाह लगायतको उत्सवमा उनको गीतमा रमाउनेहरुको ताती लाग्छन्। परिवारका कुनै सदस्य गीत संगीतमा लागेका छैनन् तर पनी कमला नेपाली गीत संगीत त्यसमा पनी लोक गीतमा दोहोरी गाउन आफना अग्रजका अगाडि तम्तयार भै हाल्छिन ।
Prevडोनल्ड ट्रम्पका भाइको दुखद निधन
Nextदुवईको अस्पतालमा उपचार हुँदैन भनेर फिर्ता गरिदिएका यि नेपालीले घरमै यस्ता जडिबुटि खाएर निको पारे कोरोना (भिडियो हेर्नुस्)
‘भिटेन’ फेरि तानिए वि’वादमा : का’रबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यलयको निर्देशन
खुसिको खबर: अब दुई श्रीमती बिहे गर्नेलाई सरकारले भत्ता दिने
पाकिस्तानी केटोले फसायो नेपाली चेलीलाई, रुदै आईन मिडियामा (भिडियो सहित)
भर्खरै बाघले घरभित्रबाट आमालाई घिसारेर छे,द,बि,च्छे,द गरेर टु,क्रा टु,क्रा पारेर खा,यो (हेर्नुस् भिडियो )
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (127676)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (97904)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (75488)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (70218)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64929)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (56126)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (50743)
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (44467)
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (44332)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (42753)
यिनै हुन आज महाकाली तर्ने क्रममा एसएसबीले तुइन का’टिदिँ’दा बे’पत्ता बिक्रम
कर्णाली नदीमा जीप खस्यो,आमाबाबु बे पत्ता, तीन जना छोराछोरीको उद्धार
पाथिभारा माताको जय, साउन १६ गते शनिवारको राशिफल हेर्नुस
भीम रावलको भाग्य चम्कियो, बन्ने भए एमाले अध्यक्ष !
धन कमाउन मलेशिया गएका एक नेपालीको दुखत निधन ! परिवारमा बिचल्ली, को हुन उनी हेर्नुस।